192.168.8.1 - သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် 192.168.8.1 ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသောစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုဖော်ပြထားသည် https://19216881.one/.
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူမှတ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုသင်သဘောမတူပါက 192.168.8.1 ကိုဆက်လက်မသုံးပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားအကူအညီဖြင့်ဖန်တီးထားသည် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ Generator ကို နှင့် အခမဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ Generator ကို.
ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ 192.168.8.1 ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် 192.168.8.1 ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်သဘောတူညီချက်အရ cookies များကိုအသုံးပြုရန်သင်သဘောတူခဲ့သည်။
192.168.8.1 နှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏လိုင်စင်ရသူများသည်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက်အသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကို 192.168.8.1 တွင်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုကာကွယ်ထားသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသောကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် 192.168.8.1 မှသင်ဤကိုရယူနိုင်သည်။
192.168.8.1 ကနေရောင်း, ငှားသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရပစ္စည်း
192.168.8.1 ကနေပစ္စည်းကိုပြန်လုပ်, ပွားသို့မဟုတ်ကူးယူပါ
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အသုံးပြုသူများအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အချို့သောနေရာများတွင်ထင်မြင်ချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ရန်နှင့်ဖလှယ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ 192.168.8.1 သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သူတို့မရောက်ရှိမီမှတ်ချက်များကိုစိစစ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုပါ။ မှတ်ချက်များသည် 192.168.8.1 ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုမထင်ဟပ်ပါ။ မှတ်ချက်များသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုတင်ပြသောသူ၏အမြင်နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထင်ဟပ်သည်။ သက်ဆိုင်သောဥပဒေများကခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအရ 192.168.8.1 သည်ထင်မြင်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖော်ပြခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့် / သို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရသောမည်သည့်တာဝန်ယူမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
192.168.8.1 မှတ်ချက်များအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မသင့်လျော်, ထိုးစစ်သို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများချိုးဖောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်မှတ်ချက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်သည်ဤနည်းအားဖြင့် ၁၉၂.၁၈၈.၈.၁ အခြားသူများကိုအသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်ခွင့်ပြုရန်အတွက်သီးသန့်မဟုတ်သောလိုင်စင်ကိုသင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံများနှင့်မီဒီယာအားလုံးတွင်အသုံးပြုရန်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပါကဤအဖွဲ့အစည်းများမှဆက်သွယ်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုလိမ့်မည်။ (က) ထို link သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမနှစ်သက်ပါ။ (ခ) အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မကောင်းသောမှတ်တမ်းမရှိပါ။ (ဂ) ဟိုက်ပါလင့်ခ်၏မြင်သာမှုမှကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကျိုးအမြတ် ၁၉၂.၁၈.၈.၁ မရှိခြင်းကိုအစားထိုးသည်။ (d) link သည်ယေဘုယျအရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ၏အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အထက်ပါအပိုဒ် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက2သို့အီးမေးလ်ပို့။ အကြောင်းကြားရမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အမည်၊ သင်၏အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်သင်၏ site ၏ URL၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် URL များစာရင်းနှင့်သင်သင်ချင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်ရှိ URLs များစာရင်းတို့ပါ ၀ င်ပါ။ link ။ တုံ့ပြန်မှုအတွက် 192.168.8.1-2 ပတ်လောက်စောင့်ပါ။
ပျက်ကွက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုချိတ်ဆက်ရန် 192.168.8.1 ၏လိုဂိုသို့မဟုတ်အခြားအနုပညာလက်ရာများအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Uncategorized post navigation